OnePlus 9 Lite: maxaan ka filan karnaa taleefankan soo socda? | Androidsis
OnePlus 9 Lite: maxaan ka filan karnaa taleefankan soo socda?
OnePlus wuxuu dabagalayay istiraatiijiyad cusub oo suuq ah tan iyo sanadkii hore, oo ka bilaabmay OnePlus North, Taleefankeeda casriga ah ee ugu horreeya ee dhexdhexaadka ah, oo ka duwan moodeellada shirkaddu leedahay, ayaa loogu talagalay adeegsadayaasha baahida yar. Kadib, markuu arkay in qaacidadan lagu guuleystay, wuxuu bilaabay taxane kale oo ah telefoonnada gacanta ee loo yaqaan 'Nord mobiles', kuwaas oo ahaa Nord N10 5G iyo N100; kan dambe ayaa doortay chipset-dhamaadka-hooseeya, isaga oo ka dhigaya aalad miisaaniyadeed.
Wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in calaamadu ay sii wadi doonto inay ku sharadto taleefannadeeda kala duwan, kuwaas oo loo muujiyey inay yihiin ikhtiyaar xiiso u leh kuwa aan heli karin taleefannada gacanta ee ugu sarreeya shirkadda. Si kastaba ha noqotee, OnePlus wuxuu ku dari karaa silsilado cusub oo taxane ah, oo keeni doona moodooyinka "Lite" ee calankeeda, tanina waxay ku bilaabmi doontaa midka xiga ee OnePlus 9 iyo Hal Plus 9 Lite, aaladda durba meel walba lagu xanto.
Tani waa waxa aan illaa hadda ka ognahay OnePlus 9 Lite
Waxaa jira jawi rajooyin sare oo ku saabsan waxa uu noqon doono OnePlus 9 Lite. In kasta oo moobiilkan aysan shirkaddu wali xaqiijin, haddana waxaa la sheegay inuu noqon doono mid ka mid ah moodooyinka soo socda ee ka mid noqon doona buugaagteeda, sidaa darteed haddaba waxaa jira hadal hayn badan oo ku saabsan astaamaha suurtagalka ah iyo tilmaamaha farsamo ee ay ku faani karto hal mar waxaa lagu bilaabay suuqa, taas oo dhici doonta isla waqtigaas in OnePlus 9 la soo bandhigo oo si rasmi ah loo bilaabo.
Iyadoo lagu dhawaaqay Qualcomm Snapdragon 870, waxaan hubaal ka arki doonnaa riwaayado cusub sanadkan oo dhan ka soo saarayaasha taleefannada casriga ah, illaa iyo inta taxaddarkoodu dhammaadka sare ka hadlayo. Waana in processor-ka processor-ku sidoo kale waxqabadkiisu sarreeyo, isagoo, isna, ka doorasho ka jaban kan Snapdragon 888, Barmaamijka moobiilka ugu awooda badan Qualcomm maanta.
Qalabka lagu bilaabay Snapdragon 870 wuu ka jaban yahay kuwa leh Snapdragon 888, sida iska cad, cadeynta tanina waa waxa aan ku aragnay cusub Motorola Moto Edge S, oo maalmo kahor la shaaciyey iyadoo sicir aasaasi ah oo ku saabsan 250 Yuuro la beddelayo, in kasta oo jaantuskani u dhigmo suuqa Shiinaha; Waxaan si fiican u ognahay inay tani si aad ah ugu sii kordheyso suuqa caalamiga ah, laakiin xitaa sidaas oo ay tahay waa caddeynta ugu horreysa ee dhamaadka-sare sare ee cusub ee 2021-ka.
In kasta oo qalabkan waxqabadka sare uu noqon doono "mid la awoodi karo", wuxuu yeelan doonaa maktabad ka kooban astaamo aad u xiiso badan iyo qeexitaanno farsamo, kuwaas oo aan ka mid nahay, sida ku xusan warar xan ah iyo xogo dhowaan soo baxay, shaashad dhererkeedu dhan yahay 6.5-inji - ama ka yar - oo heerka cabbitaanku yahay 90 ama 120 Hz; waxay u badan tahay inay ku timaaddo 90 Hz. Taa bedelkeeda, tiknoolajiyada guddigani waxay noqon doontaa nooca IPS LCD, si loo yareeyo kharashyada.
OnePlus 9 iyo 9 Pro: qaar ka mid ah astaamaha ugu waaweyn waa la xaday [+ Renders]
RAM-ka OnePlus 9 Lite waxaa lagu soo bandhigi doonaa laba nooc, oo noqon doona 6 iyo 8 GB. Meesha gudaha lagu keydiyo, dhanka kale, waxay noqon laheyd 128 GB oo keli ah labada kiisba, iyadoon macquul aheyn in lagu balaariyo kaarka microSD. Tan dambe waxaa sabab u ah xaqiiqda ah in noqon lahaa buufin u adkaysta, iyo hirgelinta booska microSD ayaa dhibaato ku noqon lahaa.
Bixinta xaddidan ee OnePlus 9 Pro
Nidaamka kaamirada gadaal ee mobiladu wuxuu noqon lahaa seddex jibaar wuxuuna ka koobnaan lahaa dareeraha ugu weyn ee 48 MP iyo laba dhinac oo ballaadhan iyo macro ah 16 iyo 5 MP, siday u kala horreeyaan. Intaas waxaa sii dheer, kamaradda hore, oo suuragal ah inay gaarto daloolka shaashadda, waxay noqonaysaa 16 Xildhibaan.
4.300 mAh oo awood ah ayaa ku habboon batteriga taleefanka, halka astaamaha 30-watt Warp Charge 30T tiknoolajiyadda degdegga ku shaqeeya ay noqon doonto midka aan heli lahayn. Tan waxaa lagu soo oogi doonaa iyada oo loo marayo dekedda USB-C.
Astaamaha kale ee la qiyaasayo waxay xusayaan gadaal ama akhristaha sawirka faraha, NFC isku xirnaanta, iyo Bluetooth 5.1. Android 11 waxay noqon laheyd nidaamka qalliinka ee uu ku yimaado qeybta ugu dambeysa ee OxygenOS.
Waxaan sugeynaa xaqiijinta iyo ku dhawaaqida waxaas oo dhan, iyo sidoo kale qiimaheeda iyo taariikhda la bilaabayo, in kastoo aan marka hore ogaanno in qaabkan dhab ahaan la bilaabi doono iyo in kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » OnePlus 9 Lite: maxaan ka filan karnaa taleefankan soo socda?
Square Enix waxay ka bilaabeysaa gacha fanaaniinta halyeeyga ah ee loo yaqaan 'Dragon Quest Tact'